Indlela uMama Waba Ngayo Uphefumlelwe Nge-Velcro
Ngubani owavusa iVelcro?
Ngaphambi kwekhulu lama-20 leminyaka, abantu babehlala kwilizwe elingaphantsi kwe-Velcro apho ii-zippers zazingumgangatho kwaye izicathulo zafuneka zibekwe. Yonke into eyatshintshileyo ngelilanga elihle kakhulu ehlobo ngo-1941 xa i-mountaineer and inventor egama linguGeorge de Mestral yanquma ukuthatha inja yakhe ngokunyuka kwendalo.
UDe Mestral kunye neqabane lakhe elithembekileyo bobabini babuyela ekhaya bembethe i-burrs, i-seed-bags-bags ehlangene noboya bezilwanyana njengeendlela zokusasaza kwiindawo ezintsha zokutshala.
Waqaphela ukuba inja yakhe yahlanganiswa kwizinto. UDe Mestral wayengumqhubi waseSwitzerland owayenomdla ngokuqhelekileyo kangangokuba wathatha isampula yabaninzi abaninzi abambelele kwibhulukhwe zakhe waza wawabeka phantsi kwe- microscope ukuba abone indlela izityalo ze-burdock ezitshiyelweyo zavumela ukuba zibambelele kwiindawo ezithile. Mhlawumbi, wacinga, angasetyenziselwa into encedo.
Ekuhloliseni okufutshane, kwakungamaqhekeza amancinci ayenzela ukuba ibhola le-seed burra lixhomeke ngokukhawuleza kwiintambo ezincinci kwintsimbi yakhe. Njengaloo mzuzu u-De Mestral wamomotheka kwaye wacinga into ethile emigca ethi "Ndiza kudibanisa i-fastener ehlangeneyo, elinye icala kunye nezikhonkwane ezinzima ezifana ne-burrs nakwelinye icala kunye neengubo ezithambileyo njengengubo yamagqabi Ndiza kubiza ukuba i-velcro indibaniso yegama elithi velor kunye ne-crochet.
Iingcamango zikaDe Mralral zadibana kunye nokuhleka, kodwa umqambi akazange ahlaziye.
Wasebenza kunye ne-weaver kwisityalo se-textile eFransi ukugqiba ukuzila ukudla ngokuzama izinto eziza kuhamba kunye nokuhamba ngendlela efanayo. Ngelilingo kunye nephutha, waqonda ukuba i-nylon xa ityunyiwe phantsi kobushushu be-infrared yakha iindawo ezinzima ezibhekiselele kwi-burr. Ukufumanisa kuye kwakhokelela ekuqulunqweni olugqityiweyo enelungelo lobunikazi ngo-1955.
Ekugqibeleni wayeza kufaka iVelcro Industries ukuvelisa nokusabalalisa. Ngama-1960, i-Velcro fasteners yenze indlela eya kwithuba elingaphandle njenge- Apollo astronauts ebenxiba ukuba bagcine izinto ezifana neepenethi kunye nezixhobo ezivela kumanqanaba athile. Ekuhambeni kwexesha, umkhiqizo waba ngumntu wegama lomntu njengeenkampani ezinjengePuma ezisetyenziselwa izicathulo zokutshintsha iinqaba. Abenzi beebhokhwe u-Adidas noReebok baya kulandela ngokukhawuleza. Ngethuba lokuphila kukaMastral, inkampani yakhe ithengise umyinge wee-60 million zeeVelcro ngonyaka. Akulunganga ngokuveliswa okuphefumlelwe ngumama kamama.
Namhlanje awukwazi ukuthenga i-velcro ngeteknoloji ngenxa yokuba igama liphawu lokuthengisa elibhalisiweyo kwimveliso yeVelcro Industries, kodwa unako konke ukulungiswa kwe-velcro brand kunye ne-loop fasteners oyifunayo. Oku kwahlukileyo kwenziwa ngenjongo kwaye kubonisa ukuba abaqambi beengxaki bahlala bejongana. Amaninzi amaninzi asetyenziswe rhoqo kwiilwimi zansuku zonke bekunakuba ziimpawu zorhwebo, kodwa ekugqibeleni zibe yimigomo. Imizekelo eyaziwayo ibandakanya i-escalator, thermos, i-cellophane kunye ne-nylon. Ingxaki kukuba xa kuthengiswa amagama ahlala kwindawo eqhelekileyo, iiNkundla zase-US zinokukhanyela amalungelo asemthethweni kwirhwebo.
Uthando 'I-Nutcracker Matshi?' Funda ngakumbi malunga neNgoma apha
Ubume beNtshumayelo yeNtaba
Indlela Yokubhiyozela Usuku LukaValentine eJapan
Izibonelelo Ezinkulu Zokufumana Ubusuku Buhle Bulele
U-Anne Tyng, umCwangcisi wokuPhila kwiJyometri
#NeverTrump: I-Conservatives Against Trump
Umhla woMlando we-Afrika-weMerika: 1900 ukuya ku-1909
Uluhlu lwadlalwayo lweengoma malunga noBawo